Sumo yeMunyori - Izwi reShoko
Mashoko Okutanga Emunyori
Munyori Anotsanangurwa ku:
Kufungisisa uye DESTINY
Bhuku iri rakanyorerwa Benoni B. Gattell panguva dzakasiyana pakati pemakore 1912 uye 1932. Kubva panguva iyoyo yakashanda zvakare uye zvakare. Iye zvino, mu1946, pane mapeji mashomanana asina kumbobvira achinjwa zvishoma. Kuzvidzivirira kudzokorora uye kunetseka mapeji ose akabviswa, uye ndakawedzera zvikamu zvakawanda, ndima uye mapeji.
Pasina rubatsiro, hazvina chokwadi kana basa racho raizove rakanyorwa, nokuti zvakanga zvakaoma kwandiri kufunga nekunyora panguva imwe chete. Mumuviri wangu waifanira kunge wakanyarara apo ndaifunga nyaya yacho muchimiro uye ndakasarudza mazwi akakodzera kuti aite chimiro chemufananidzo wacho: uye naizvozvo, ndiri kumuonga chaizvo nokuda kwebasa raakaita. Ndinofanirawo pano kubvuma mahofisi emhando dzevamwe shamwari, vanoda kuregwa kusatumidzwa zita ravo, nekuda kwemazano avo uye rubatsiro rwepamhizha mukupedzisa basa.
Basa rakaoma zvikuru nderokuwana mazwi ekuratidza nyaya yakarondedzerwa yakarapwa. Kushingaira kwangu kwakave kuri kuwana mazwi nemitsara inonyanya kuratidza zvinoreva uye maitiro ezvimwe zvinhu zvisingaiti, uye kuratidzira ukama hwavo husinganzwisisiki kune vanozviziva mumitumbi yevanhu. Mushure mekuchinja kudzokorora ini pakupedzisira ndakagadzirirwa pamashoko anoshandiswa pano.
Nyaya dzakawanda hazviitwi zvakajeka sezvandingadi kuti dzive, asi kuchinja kunoitwa kunofanira kunge kwakakwana kana kusingaperi, nokuti pane imwe neimwe kuverenga dzimwe shanduko dzakaratidzika dzakakosha.
Handifungi kuti ndiparidze kune ani zvake; Handifungi somuparidzi kana mudzidzisi. Dai zvakanga zvisiri kuti ndine mhosva pamusoro pebhuku racho, ndingada kuti hupenyu hwangu hurege kutumidzwa semunyori wayo. Ukuru hwezvidzidzo zvandinopa ruzivo, kunondisunungura uye kunondisunungura kubva pakuzvifunga uye kunorega kukumbira kwekuzvininipisa. Ndinotya kutaura zvisinganzwisisiki uye zvinotyisa kumunhu anoziva uye asingafi uri mumitumbi yose yevanhu; uye ini ndinotora pachena kuti munhu wacho achasarudza zvaanoda kana kuti haazoiti nemashoko akaiswa.
Vanhu vanofunga vakatsigira kudiwa kwokutaura pano pane zvimwe zvandaifunga mumamiriro ezvinhu ekuziva, uye nezvezviitiko zvehupenyu hwangu zvinogona kubatsira kutsanangura kuti zvaive zvakakwanirei kuti ndizive uye ndinyora zvezvinhu zvakadai Kusiyana kwezvavanotenda. Vanoti izvi zvakakosha nokuti hapana bhuku rekunyora mabhuku rakabatanidzwa uye hapana zvinyorwa zvinopiwa kuti zvigadzirise zviri kutaurwa pano. Zvimwe zvezviitiko zvangu zvakange zvisina kufanana nezvimwe zvandakambonzwa kana kuverenga. Kufunga kwangu pamusoro pehupenyu hwevanhu uye nyika yatinogara mariri kwakaratidzwa kwandiri zvidzidzo uye zviitiko zvandisina kuwana zvakataurwa mumabhuku. Asi zvingava zvisina musoro kufunga kuti nyaya dzakadaro dzinogona kunge dziri, asi dzisingazikamwi kune vamwe. Panofanira kunge kune avo vanoziva asi havagoni kuudza. Ini ndiri pasi pechibvumirano chekuvanzika. Ini ndiri wechiri musangano chero ipi zvayo. Handina kutenda pakutaura zvandakawana nekufunga; kuburikidza nekufunga kwakasimba paanenge amuka, kwete muhope kana mukutenda. Handisati ndambove kana kuti ini ndinongoda kuva mukutenda kwemarudzi ose.
Zvandave ndichiziva pavanenge ndichifunga nezvenyaya dzakadaro sedzvimbo, zvikamu zvehutano, mutemo wezvinhu, njere, nguva, zviyero, kusika uye kugadzirisa mafungiro, ndicha, ndakavimba, ndakazarura mazamu ekutsvakurudza nekushandiswa kwemazuva ano . Panguva iyoyo mufambiro wakanaka unofanira kuva chikamu chehupenyu hwehupenyu, uye inofanira kuramba ichienzanisa nesayenzi nekugadzirwa. Ipapo hupfumi hunogona kuramba huchienderera mberi, uye kuzvidzora neHurununguro kuchava mutongi wehupenyu humwe uye hurumende.
Heano mufananidzo wezvimwe zviitiko zvehupenyu hwangu hwekutanga:
Rhythm yaiva manzwiro angu okutanga ekubatana nenyika ino. Gare gare ndainzwa mukati memuviri, uye ndainzwa mazwi. Ndakanzwisisa zvinorehwa nemanzwi aitwa nemazwi; Handina kuona chinhu, asi ini, semanzwiro, ndaigona kuwana zvinorehwa neshoko chero ripi-izwi rinoratidzwa, nerwiyo; uye kunzwa kwangu kwakapa mufananidzo uye ruvara rwezvinhu zvakatsanangurwa nemashoko. Apo ndaigona kushandisa pfungwa yekuona uye ndaigona kuona zvinhu, ndakawana mafomu uye maitiro ayo ini, sokufunga, ndakanga ndanzwa, kuti ndive mune chibvumirano chakaenderana nezvandakanga ndawana. Pandakanga ndava kushandisa simba rekuona, kunzwa, kuravira uye kunhuwa uye kunogona kubvunza uye kupindura mibvunzo, ndakazviwana ndiri mutorwa munyika isingazivikanwi. Ndaiziva kuti ini handiri muviri wandaigara, asi hakuna munhu aigona kundiudza kuti ndiani kana kuti ndaiva kupi kana kuti ndakabva kupi, uye vazhinji vevaya vandakabvunza vaiita sekutenda kuti yaiva miviri yavakagara.
Ndakaona kuti ndaive mumuviri wandisingakwanise kuzvisunungura. Ndakanga ndarasika, ndiri ndega, uye ndiri mune hurombo mamiriro ekusuwa. Zvinoitika zvinodzokororwa nezviitiko zvakandipa chivimbo chekuti zvinhu hazvisi izvo zvavaitaridzika kuva; kuti pane kuenderera shanduko; kuti hapana chinogara zvachose; kuti vanhu vaigara vachitaura zvinopesana nezvavanoreva chaizvo. Vana vaitamba mitambo yavanodaidza kuti "make-believe" kana "regai tiedzesere." Vana vaitamba, varume nevakadzi vaidzidzira kunyepedzera uye kunyepedzera; vanhu vashoma vaitaura chokwadi uye vairevesa. Paive nemarara mukuedza kwevanhu, uye kuoneka hakuna kuramba. Chitarisiko hachina kuitwa kuti chigare. Ini ndakazvibvunza kuti: Zvinhu zvinogadzirwa sei kuti zvigare, uye zviitwe pasina kutambisa uye kusagadzikana? Chimwe chikamu changu chakapindura: Kutanga, ziva zvaunoda; ona uye wakatsiga ubate mupfungwa chimiro chaungave uine zvauri kuda. Wobva wafunga uye woda uye utaure izvozvo muchimiro, uye izvo zvaunofunga zvichaunganidzwa kubva mudenga risingaonekwe uye zvigadziriswe mukati nekukomberedza chimiro icho. Ini handina kubva ndafunga mumazwi aya, asi mazwi aya anoratidza zvandaifunga ipapo. Ndakanzwa ndine chivimbo kuti ndaigona kuzviita, uye pakarepo ndakaedza uye ndakaedza kwenguva refu. Ndakatadza. Pakukundikana ndainzwa kunyadziswa, kudzikisirwa, uye ndainyara.
Handikwanisi kubatsira kucherechedza zviitiko. Zvandakanzwa vanhu vanotaura pamusoro pezvinhu zvakaitika, kunyanya nezvekufa, hazvina kuoneka zvakanakira. Vabereki vangu vaiva vaKristu vakazvipira. Ndakazvinzwa zvichiverengwa uye zvakati Mwari akaita nyika; kuti akasika mweya usingafi kune muviri umwe neumwe wemunhu munyika; uye kuti mweya uyo usina kuteerera Mwari waizokandirwa mugehena uye waizopisa mumoto nesarufa nokusingaperi-peri. Handina kutenda shoko razvo. Zvaiita sezvisinganzwisisiki kuti ini ndifunge kana kuti nditende kuti Mwari chero upi zvake kana kuti angave akasika nyika kana kuti akandiumba ini mumuviri wandaigara. Ndakanga ndapisa munwe wangu nerutivi rwemurairo, uye ini ndaidavira kuti muviri unogona kupiswa kusvikira afa; asi ini ndaiziva kuti ini, chii chakanga chandinoziva sezvandaifunga, ndisingagoni kupiswa uye ndisingagoni kufa, kuti moto nesarufa hazvigoni kundiuraya, kunyange marwadzo ezvo aipisa aityisa. Ndaigona kuona njodzi, asi ini handina kutya.
Vanhu vakanga vasingaita sevanoziva 'nei' kana kuti 'chii', nezvehupenyu kana nezvekufa. Ndaiziva kuti panofanira kuva nechikonzero chezvinhu zvose zvakaitika. Ndaida kuziva zvakavanzika zvehupenyu uye nerufu, uye kurarama nokusingaperi. Ndakanga ndisingazivi chikonzero nei, asi handina kukwanisa kubatsira kuchida icho. Ndaiziva kuti pakanga pasina husiku nemasikati noupenyu nerufu, uye hapana nyika, kunze kwekuti paiva nevane vakachenjera vakakwanisa nyika uye usiku uye masikati noupenyu nerufu. Zvisinei, ndakasarudza kuti chinangwa changu chaiva chekuwana avo vakangwara vaizondiudza kuti ndinofanira kudzidza sei uye zvandinofanira kuita, kuti ndigamuchire zvakavanzika zvehupenyu nerufu. Handingatombofungi kutaura izvi, kusarudza kwangu kwakasimba, nokuti vanhu havanganzwisisi; vaizondidavira kuti ndiri benzi kana upenzi. Ndaive nemakore anenge manomwe panguva iyoyo.
Makore gumi nemashanu kana kupfuura akapfuura. Ndakanga ndacherechedza maonero akasiyana nehupenyu hwevakomana nevanasikana, apo ivo vakakura uye vakachinja kuva varume nevakadzi, kunyanya munguva yevechiri kuyaruka, uye kunyanya yevangu. Maonero angu akanga achinja, asi chinangwa changu - kuwana avo vakanga vakachenjera, avo vaiziva, uye kubva kwavari ndaigona kudzidza zvakavanzika zvehupenyu nerufu - hazvina kuchinja. Ndaive nechokwadi chekuvapo kwavo; nyika yaisagona kuva, isina ivo. Mukugadzirisa kwezviitiko ndaigona kuona kuti panofanira kunge kune hurumende uye vatungamiri vemunyika, sezvinofanira kunge kune hurumende yenyika kana kutungamira kwebhizimisi chero ipi zvayo kuti idzi dzirambe dzichienderera mberi. Rimwe zuva amai vangu vakandibvunza zvandaidavira. Pasina kunetseka ndakati: Ndinoziva pasina mubvunzo kuti ruramisiro inotonga nyika, kunyange zvazvo hupenyu hwangu hunoita sehuchapupu hwokuti hahuna, nokuti ndinogona kuona kusakwanisa kuita zvandinodzidza, uye zvandinoda chaizvo.
Mugore iroro chete, mugore reC1892, ndakaverenga mune rimwe pepa peSvondo kuti mumwe Madam Blavatsky akanga ari mudzidzi wevanhu vakachenjera kuMabvazuva vainzi Mahatmas; kuti kuburikidza nehupenyu huripo pasi pano, vakange vawana uchenjeri; kuti vakange vane zvivimbiso zvehupenyu nerufu, uye kuti vakange vaita kuti Madam Blavatsky aumbe Theosophical Society, kuburikidza nedzidziso dzavo dzaigona kupa kuvanhu. Panove nehurukuro manheru iwayo. Ndakaenda. Gare gare ndakava nhengo yakasimba yeSosaiti. Mutsara wekuti kune varume vakangwara - nemazita ose avakadanwa - havana kundishamisa; icho chaingova uchapupu hwemashoko ezvo zvandaive ndaive ndisina chokwadi chekuti zvakakosha pakufambira mberi kwevanhu uye nekuda kwekutungamirirwa nekutungamirirwa kwezvakasikwa. Ndakaverenga zvose zvandaigona pamusoro pavo. Ndakafunga nezvekuva mudzidzi weumwe wevakachenjera; asi akaenderera mberi achifunga akanditungamirira kuti ndinzwisise kuti nzira chaiyo yakanga isiri yevhesi yepamutemo kune ani zvake, asi kuti ndive akakodzera uye ndakagadzirira. Handina kumboona kana kunzwa kubva, uye handina kumboonana, 'vakachenjera' sekunge ndave nemimba. Handina mudzidzisi. Iye zvino ndava nokunzwisisa zviri nani nyaya dzakadaro. Ichokwadi 'Vakachenjera' ndivo Vanodzivirira vatatu, muRealm of Permanence. Ndakarega kushamwaridzana nevanhu vose.
Kubva munaNovember we1892 ndakapfuura nepanoitika zvinoshamisa uye zvakakosha, zvinotevera, mukati megore ra1893, pane zvakaitika kune imwe nguva inoshamisa yehupenyu hwangu. Ndakanga ndayambuka 14th Street ku4TH Avenue, muNew York City. Motokari nevanhu vakanga vachikurumidza. Ndichiri kuenda kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwekona, Chiedza, chakakura kudarika chemazana emasikati akazaruka mukati mepamusoro mangu. Mune nguva iyoyo kana kuti chinhano, zvisingaperi zvakasungwa. Pakanga pasina nguva. Kureba uye zviyero zvakanga zvisina kuonekwa. Zvinhu zvakasikwa zvikamu. Ndanga ndichiziva zviyero zvezvisikwa uye zvezvikwata seIntelligences. Mukati nepamusoro, saka kutaura, pakanga paine Zviratidzo zvikuru uye zvishoma; iyo yakakura zvikuru iyo Mwenje miduku, iyo yakaratidza marudzi akasiyana eunyamu. Mwenje yakanga isiri yezvakasikwa; ivo vaiva Mwenje seIntelligences, Conscious Lights. Zvichienzaniswa nekupenya kana kuchena kweZviedza izvi, chiedza chezuva chakange chakakomberedza chaiva dutu guru. Uye mukati uye kuburikidza neChiedza chese uye zviyero nezvimwe zvinhu ndaive ndichiziva hupo hweHupo hweNyasha. Ndakanga ndichiziva Consciousness seYokupedzisira uye Isina Chokwadi, uye ndinoziva hukama hwezvinhu. Handina kufara, kunzwa, kana kufara. Mashoko anokundikana zvachose kuti atsanangure kana kutsanangura CHINOKOSHA. Zvingava zvisina maturo kuedza kutsanangurwa kwehukuru hwakakura uye simba uye kurongeka uye hukama muhutano hwezvandakanga ndava kuziva. Kaviri mukati memakore gumi nemana akatevera, kwenguva refu pachiitiko chimwe nechimwe, ndaiziva Consciousness. Asi panguva iyoyo ndakanga ndisingazivi zvekuti ndakanga ndichiziva munguva iyoyo yekutanga.
Kuziva Conscious ndiyo yakagadzirirwa mazwi akafanana andakasarudza semutsara kuti nditaure nezveiyo yakakosha uye inoshamisa nguva yehupenyu hwangu.
Kunzwisisa kuripo mune zvose zvese. Nokudaro kuvapo kweChenjeri kunoita kuti zvikamu zvose zvive nekuziva sekushanda kwayo kunoitwa pachidimbu chaicho.
Kuziva Conscious kunoratidza "zvisingazivikanwi" kune uyo akave akazviziva. Zvino zvichava basa reiyeye kuti azivise zvaanokwanisa zvekuziva Consciousness.
Izvo zvakakosha pakuziva Conscious ndeyokuti inoita kuti munhu azive nezvenyaya ipi neipi, nekufunga. Kufungisisa ndiko kuchengetedza kwakasimba kweChinhu Chiedza mukati memusoro wekufunga. Muchidimbu zvakataurwa, kufunga ndezvezvikamu zvina: kusarudza nyaya; achibatisisa Chiedza cheNyasha pachikamu ichocho; kutarisa chiedza; uye, chinangwa cheChiedza. Apo Chiedza chichitarisa, nyaya yacho inozivikanwa. Nenzira iyi, Kufungisisa uye Destiny zvakanyorwa.
Chinangwa chinokosha chebhuku rino ndechekuti: Kuudza avo vanoziva mumitumbi yevanhu kuti isu tisingagoni kuparadzaniswa zvikamu zvehutatu husingafi husingafi, Triune Selves, uyo, mukati nokunze kwemazuva, akagara nemafungiro edu makuru uye anoziva mumitambo isina kukwana muNyika yePermanence; kuti isu, avo vanozviziva iye zvino mumitumbi yevanhu, vakakundikana mumuedzo wakaoma, uye nokudaro takatapwa kubva kune iyo nyika yekusingaperi kune murume uyu nemudzimai wenyika yenyika yekuzvarwa nekufa nekuvapo zvakare; kuti hatina chiyeuchidzo chezvizvi nokuti tinozviisa muhope dzekuzvifungidzira, kurota; kuti ticharamba tichirota kuburikidza nehupenyu, kuburikidza nerufu nekudzoka zvakare kuhupenyu; kuti isu tinofanira kuramba tichiita izvi kusvikira tati-kutadza, kumuka, isu pachedu kubva kune hypnosis umo tinozviisa pachedu; kuti, zvisinei nekureba kwenguva inotora, isu tinofanira kumuka kubva pakurota kwedu, tive kuzviziva isu pachedu mumitumbi yedu, uye tadzorerazve uye kudzorera miviri yedu kuupenyu husingaperi mumusha medu- Nyika yekusingaperi kwatakasvika - iyo inowedzera nyika ino yedu, asi haisi kuonekwa nemunhu anofa. Zvadaro tichazoziva kutora nzvimbo dzedu nekupfuurira zvikamu zvedu muEternal Order of Progression. Nzira yekuita izvi inoratidzwa muzvitsauko zvinotevera.
Pano izvi kunyora rugwaro rwebasa iri kune printer. Pane nguva shoma yekuwedzera pane zvakanyorwa. Munguva yemakore mazhinji ekugadzirira kwayo yave ichiwanzobvunzwa kuti ini ndinosanganisira mune zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa zveBhaibheri zvinoratidzika kusinganzwisisiki, asi izvo, muchiedza chezvakataurwa mumapeji aya, zvinonzwisisika uye zvinoreva, uye ndezvipi , panguva imwechete, vatsigira zvakataurwa mubasa iri. Asi ndakanga ndisingatauri kuenzanisa kana kuratidza mabhairano. Ndaida kuti basa iri ritongorwe pane zvaro chete.
Mugore rapfuura ndakatenga vhoriyamu raive neMabhuku Akarasika eBhaibheri uye Iwo Akakanganwa Mabhuku eEdeni. Pakushandisa mapeji emabhuku aya, zvinokatyamadza kuona kuti ndedzipi ndima dzisinganzwisisike uye dzisinganzwisisike dzinogona kunzwisiswa kana munhu akanzwisisa zvakanyorwa pano pamusoro peTriune Self nezvikamu zvacho zvitatu; pamusoro pekuvandudzwa kwemuviri wemunhu kuita muviri wakakwana, usingafi, neRegional Permanence, iri mumashoko aJesu "Humambo hwaMwari."
Zvakare zvikumbiro zvakaitwa kuitira kutsanangurwa kwemavara eBhaibheri. Zvichida zvakanaka kuti izvi zviitwe uyewo kuti vaverengi vekufunga nekuparadzwa vanopiwa humwe humwe uchapupu hunotsigira mamwe mazwi mubhuku rino, uchapupu hunogona kuwanika muTesitamente Itsva uye mumabhuku ari pamusoro apa ataurwa. Nokudaro ini ndichawedzera chikamu chechishanu cheChitsauko X, Mwari uye Zvitendero zvavo, vachitarisana nenyaya idzi.
Ramba Uchitaura ➔